Nezvedu - Jinan Simba Rubber Roller Equipment Co, Ltd.
Chizvarwa chedu chitsva cherabha chinotenderera michina inopa chikuva chakanaka chehungwaru kugadzira. Kubatana pakati pevatungamiriri vezvigadzirwa nevashandisi vemumunda, kugovana dhata, kurekodha uye kuongorora kunogona kuwanikwa kuburikidza nekushanda chikuva chemidziyo, kugadzira mamiriro akanaka ekutonga kwakasiyana mukugadzira.
Kambani yedu irikugadzira vagadziri vemabhora erabha vane michina yakanyatsoita, yakasimba uye inobereka. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira: Rubha Roller Yekutsemura Muchina, CNC Kukuya / Grooving Mashini, CNC Cylindrical Grinder, Rubber Roller Kuvhara Mashini, Rubber Roller Polishing Machine, Professional Kuyera Chombo, Nezvakadaro.
Muna 2000, zvigadzirwa zvedu zvakapfuura kuongororwa neCCIB Quality Certification Center zvinoenderana neIO 9001 zviyero. Nekushandisa zvishandiso zvedu, iwe uchawedzera kugadzirisa kushanda, uye kusimudza chigadzirwa mhando. Zvakare zvinogona kuunza mari yakawanda.